शुक्लागण्डकीको बजेट सार्वजनिक
खैरेनीटार, २१ साउन । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभाबाट पारित आर्थिक वर्ष२०७५/७६ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रवक्ता खिमबहादुर कुमालले नगरपालिकाको वाषिर्क विभिन्न कार्यक्रमबारे जानकारी गराए। उनले ६७ करोड ७५ लाख ८१ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेटको आयतर्फसंघीय सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १४ करोड ५ लाख, संघीय सरकार राजस्व बाँडफाँडबाट ९३… पुरा पढौ
कोरिया जाने हवाई भाडा घटयो
काठमाडौँ, २१ साउन । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारले हवाई टिकटबापत तिर्नुपर्ने रकम घटेको छ। नेपालबाट कोरिया जाने प्रत्येक नेपाली कामदारले हवाई भाडाबापत तिर्ने रकम ५ सय ३० अमेरिकन डलरबाट ४ सय ११ अमेरिकन डलरमा झरेको वैदेशिक रोजगार विभाग, इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ। अब नेपाली कामदारले कोरिया जाँदा हवाई टिकटबापत ४ सय ११… पुरा पढौ
दुःखको कारण आफैं : डा मणिभद्र
पोखरा, २१ साउन।नेपाल केशरी डा. मणिभद्र मुनिजी महाराजले आफैँलाई नचिन्नु नै मानिसको दुःखको कारण भएको बताएका छन्। चातुमासको अवसरमा जैन स्थानक भवन एयरपोर्ट पोखरामा आयोजित नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत सोमवार आशीवचन प्रदान गर्दै डा. मणिभद्रले मानिसले आफ्नो शक्ति माथि विश्वास नगरेर अरुको साथ खोज्दा र सम्बन्ध बढाउँदै जाँदा पनि दुःख बढ्दै जाने बताए। मेरो भविष्यको निर्माता म आफैँ हुँ भनेर सर्त्कर्ममा… पुरा पढौ
क्षयरोग निवारण संस्थाको साधारणसभा
पोखरा, १९ साउन। नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था कास्कीको ३८ औं साधारणसभा सम्पन्न भएको छ। संस्थाका केन्द्रीय महासचिव मदनकाजी श्रेष्ठले साधारणसभा उद्घाटन गर्दै क्षयरोगबारे सचेतना अभिवृद्धिको कार्यक्रममा संस्थाको ३७ जिल्ला शाखामध्ये कास्की शाखाले उल्लेखनीय कार्य गरेको बताए। सरकारले क्षयरोगसम्बन्धी जनतासम्म पुर्‍याउने सेवा र कार्यक्रमबारे जनचेतना अभिवृद्धिका लागि संस्थाले सहजीकरण गर्ने महासचिव श्रेष्ठको भनाइ थियो। पोखरा ११ का कावा अध्यक्ष जंगबहादुर हमाल… पुरा पढौ
कृस्तीमा लागु औषध सचेतना
पोखरा। पोखरा २१, रामदीमा लागु औषधसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिबार सम्पन्न भयो। वडाध्यक्ष खगराज आचार्यको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा क्लब सदस्य, आमा समूह, टोल विकास संस्थाका सदस्यको सहभातिगा रहेको थियो। एक हाते युवा क्लबको आयोजनामा भएको सो प्रशिक्षण कार्यक्रममा छोरेपाटन चौकीका प्रमुख प्रहरी नायव निरीक्षक होतबहादुर रोकाले लागु औषधको परिचय, प्रकार, सेवनकर्ताको लक्षण, कानुनी व्यवस्थाबारे प्रशिक्षण दिए ।यस्तै, छोरेपाटन चौकीको आयोजनामा पोखरा… पुरा पढौ
सामुदायिक प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण : बोहरा
पोखरा, १९ साउन । गण्डकी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक दानसिंह बोहराले नेपाल प्रहरीको जनमुखी प्रहरी अभियानमा सामुदायिक प्रहरी सेवाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् । सामुदायिक सेवा केन्द्र एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र बैदाम पोखराको शनिबार १७ औ वाषिर्क साधारण सभा तथा नवौं अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले नेपाल प्रहरीसँगै हातेमालो गर्दै समाजका विकृति-विसंगति निराकरण गर्ने… पुरा पढौ
मस्र्याङ्दीले २ जनालाई बगायो
लमजुङ, १९ साउन । मस्र्यार्ङ्दी नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर २ जना किशोर बेपत्ता भएका छन् । प्रहरीले १ जनाको सकुशल उद्धार गरेको छ । बेपत्ता हुनेमा मस्र्याङ्दी गाउँपालिका- ९, सिम्पानीका १५ वर्षीय अजित थापा, वेशीशहर नगरपालिका- ६, ममैडाँडाका १५ वर्षकै योगेन्द्र रिमाल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पौडिन गएका ३ मध्ये मकैडाँडाका १५ वर्षे प्रतीक रिमालको उद्धार गरी उपचारार्थ जिल्ला अस्पताल पठाइएको उद्धार… पुरा पढौ
तालमा डुबेर ३ विद्यार्थी बेपत्ता
सोलु, १९ साउन । शैक्षिक भ्रमणमा गएका तीन विद्यार्थी शनिबार तालमा डुबेर बेपत्ता भएका छन् । खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकास्थित गोक्यो तालमा डुबेर उनीहरु बेपत्ता भएको सोलुखुम्बुका प्रहरी नायब उपरीक्षक रेशमबहादुर पराजुलीले जानकारी दिए । खुम्जुङ माध्यमिक विद्यालय कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थी शुक्रबार भ्रमणमा निस्केका थिए । तालमा नुहाउने क्रममा उनीहरु डुबेर बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । बेपत्ता हुनेमा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-४ का अन्दाजी… पुरा पढौ
जोशी निर्णयबारे अन्यौल
काठमाडौं, १६ साउन । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा नेपाली काँग्रेसका सांसदले प्रक्रियामा जान नमानेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ । सहमति जुट्न नसकेपछि मतदानमा गएर नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निष्कर्ष निकाल्नका लागि प्रक्रियामा जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि काँग्रेसका सांसदले त्यसमा जान नमानेपछि समितिको बुधबारको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का… पुरा पढौ
घोडाखच्चरको स्वास्थ्य शिविर
पोखरा, १६ साउन । पशु स्वास्थ्य तालिम तथा परर्मर्श सेवा पोखराद्वारा संचालित दिगो अश्व कल्याणका लागि मानव आचरण रुपान्तरण तथा कार्यपद्दति सुधार परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा मनाङ निःशुल्क घोडा खच्चर स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ। माथिल्लो मनाङका टङ्की, खमसार, ढाका, नरभुमी तथा तल्लो मनाङको कोतो भन्ने ठाउँमा आयोजना गरिएको सातदिने शिविरमा १ सय ४४ पशुधनीका २ सय ८२ घोडा तथा ५१ खच्चरको… पुरा पढौ